Arrival Report ofaMyanmar Trainee or student!
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, New Delhi :: Consular Section :: Matters on Myanmar Trainees and Students in India
Subject: Arrival Report ofaMyanmar Trainee or student! Fri Mar 23, 2007 5:25 pm
If you areaTrainee or Student from Myanmar , who will be attending some training programme or University in Inida, the thing you are supposed to do on your arrival at India is to send your arrival-report to Myanmar Embassy, by visiting yourself Myanmar Embassy or postal service or Fax or courier or somehow.
You are also requested to kindly describe your traing cousre's name, your arrival date , expected departure date, your contact numbers such as Phone no. , Fax no. , your own email address and other particulars regarding your course or school.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့မှ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်၊သင်တန်း ကျောင်းအသီးသီးသို့ ပညာတော်သင် အဖြစ်လာရောက် ကာ သင်တန်း ၊ကျောင်းတက်နေသူ များအနေဖြင့် နယူးဒေလီမြို့၊မြန်မာသံရုံးသို့ ရောက်ရှိကြောင်း Arrival Report ကို ကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက ဖုံး၊ဖက်စ်၊ အီးမေးလ်တို့ဖြင့် မပျက် မကွက် သတင်းပေးပို့ ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ် ပါသည်။
ထို့သို့သတင်းပေးပို့ရာတွင် မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာန၊မည်သည့်အဆင့်ရာထူး၊သင်တန်းကာလ မှ မည်သည့်နေ့ရက်မှမည်သည့်နေ့ရက်အထိမည်မျှကြာမြင့်မည်။စသည်တို့အပြင် သင်တန်း သားအားဆက်သွယ်နိုင်မည့် တယ်လီဖုံးအမှတ်၊ဖက်စ်အမှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသား၏
ကိုယ်ပိုင် E-Mail လိပ်စာ၊ လက်ကိုင်ဖုံးအမှတ်၊စသည်တို့ကို ပြည့်စုံစွာဖေါ်ပြပေးစေလိုပါသည်။
သို့မှသာ လျှင်သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသားအား မြန်မာသံရုံးအပါအ၀င် မိခင်ဝန်ကြီးဌာနမှဆက် သွယ်အကြောင်းကြားပေးစေလိုသောကိစ္စရပ်များရှိလာပါက အချိန်နှင့်တပြေးညီ လျင်မြန်ထိ ရောက်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။